Ciidamada Talyaaniga ayaa badbaadiyay tahriibayaal
Dooni siday 265 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan rag, dumar iyo caruur ayaa laga soo badbaadiyay dalka Talyaaniga, sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha Talyaaniga.
Muuqaal laga soo duubay badbaadada ayaa muujinayay ilaalada xeebaha talyaaniga oo ku deeqaya jaakadaha badbaadada, waxayna fuuleen doon caag ah si ay ugu qaadaan markab dagaal oo ku sugan meel aamin ah
Muhaajiriinta ayaa intii aysan fuulin markabka la marsiiyay heer kul heer kul ah si loo ogaado inay jiraan shaqsiyaad qaba cudurka loo yaqaan ‘Covid-19’, iyo magacyadooda iyo wadamada ay ka yimaadeen.
Weli lama shaacin jinsiyadaha dadkaasi, dalka ay ka yimaadeen iyo qorshayaasha dowladda Talyaaniga ee ku aadan noloshooda, waxayna u badan tahay in lagu wareejin doono Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Telefishanka Euro News Italiano Muuqaal laga soo duubay hawlgalka badbaadinta ee ay sameeyeen ilaalada Xeebaha ee Talyaaniga ayaa lagu sheegay in raggaasi ay markii hore qaateen askartu, laakiin lagu wareejiyay kooxaha caafimaadka iyo kooxaha samatabixinta si ay u eegaan inay ka badbaadeen Covid-19 iyo in kale.
Sanadkii 2020, tahriibayaasha badankood waxay ahaayeen muwaadiniin Soomaaliya, Itoobiya, Ereteriya, Liibiya, Nayjeeriya & Wadamo Kale, Waxay ka baxaan xeebaha Liibiya, Tuunis iyo dalal kale oo ka mid ah badda Mediterranean-ka iyagoo raadinaya nolol ay aaminsan yihiin inay ka wanaagsan tahay taooda.
Muhaajiriinta ayaa ku dhintay dooni ay saarnaayeen oo ku qalibantay badda Mediterranean
Lionel Messi ayaa xalay sameeyay
XOG: Kadib ceebtii Man City